Manchester United oo naf ka raadineysa mid ka mid ah weeraryahanadeedii hore – Gool FM
Manchester United oo naf ka raadineysa mid ka mid ah weeraryahanadeedii hore
(Manchester) 23 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qorsheeneysa in ay dib u soo ceshato weeraryahan keedii hore ee reer Argantina ee Carlos Tevez.
Man United ayaa dareemeysa dhibaatada ka heysata maqnaayishiyaha gool dhaliyaheeda sare ee Marcus Rashford, kaas oo dhaawac uu soo gaaray lugtii labaad ee kulankii FA Cup-ka ay la ciyaaren Wolves, xilli gool uu kulankaas u dhaliyay Mata ay ku qaarajiyeen wiilasha macalin Nuno .
Macalinka Ole Gunnar Solskjaer oo dhaliilo badan la kulmaya kaddib markii uu guul dareystay labadii kulan ee ugu danbeysay ayaa doonaya in mar kale uu dib ugu soo celiyo garoonka Old Trafford weeraryahanka reer Argantina ee Carlos Tevez.
Carlos Tevez oo 35 sano jir ah ayaa xilli ciyaaredkii saddexad ku qaadanaya kooxda wadankiisa hooyo ee Buco Junior, waxaana heshiiska uu kula jiro uu dhici doona bisha Juun.
Hadaaba, Carlos Tevez ayaa Old Trafford ku sugnaa intii u dhaxeysay 2007- 2009 kii, isagoo u dhaliyay 34 gool, halka uu kula guuleystay 2 jeer horyaalka Preimer Leagea iyo hal jeer oo Champions Leagea ah.
Liverpool oo xiiseeneysa xiddig ka tirsan kooxda Real Madrid
Kaddib markii ay ku guul dareysteen saxiixa Edison Cavani… (Waa kee weerarayahanka ay dooneyso Chelsea?)